Day: Mee 18, 2020
Nkeji Ikpeazu: Erdogan kpọsara Curlọ Iwu na Obodo 81 n’oge ememme
Mgbe emechara ọgbakọ ahụ, nkeji ikpeazụ nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan, onye kwuru nkwupụta… 81-23-24 na 25 Mee 26 (gụnyere 2020 na 23) [More ...]
Amuru ya na Karamürsel na 1970. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke Imam-Hatip, ọ malitere agụmakwụkwọ mahadum ya na ngalaba nchịkwa mahadum Anadolu na 1989. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ gụsịrị akwụkwọ gbasara ndụmọdụ gbasara ego. Eskişehir Osmangazi Ngalaba Mmụta Ọzụzụ [More ...]
Prọfesọ nke nyocha ihe ọmụmụ na Mahadum Maltepe. Dr. Afif Sıddıki na ndị otu ya emebela ụlọ nchekwa ahụ iji chebe ndị na-ahụ maka ahụike na ndị ọrịa ibute ọrịa site na ịlụso ọrịa coronavirus ọgụ. Injin University Maltepe na Science [More ...]
Njikọ ụgbọ oloko sitere na May 15 nke ụgbọ elu mba ụwa nke etinyere na Turkey malitere dị ka usoro nke Marmaray si jiri mbụ. Onye otu Mars Logistics Board Member Gökşin Günhan kwuru na ahịrị Marmaray [More ...]
A ga-enyerịrị eriri Ankaray na Mamak site na 8 Stations! Mpempe akwụkwọ ọkwa
Obodo Ankara ga-ejikọ mpaghara Mamak, nke dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Isi Obodo, na eriri ANKARAY na-agba n'etiti Ankara Intercity Terminal Ope (A (Tİ) na Dikimevi. Dikimevi-Natoyolu Light Rail Sistem (HRS) ngo mmemme “Mmeju [More ...]
Minista Karaismailoğlu, na nkwupụta ya, na-ahụta Transport Electronic Tracking and Control Sistem (U-ETDS), nke na-enye elele elektrọnik nke ngwongwo, ebu na njem ndị njem na-ebugharị nke ụlọ ọrụ na-arụ na njem. [More ...]
Ndepụta Nọmba Ekwentị TCDD Stations - Ugbu a 2020
Anyị achịkọtala ọnụ ọgụgụ ekwentị maka TCDD Train Stations. Nke mbu, anyi n’enye gi aka ikpo igwe ekwenti nile nke TCDD 444 8 233. Iji mee ka ọnụ ọgụgụ ahụ n'uche, site na 444 ruo ihuenyo oku na ekwentị gị [More ...]
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu mere nkwupụta maka mgbasa ozi na Lapseki, ebe ọ gara maka emume ịtinye ngọngọ ikpeazụ na nchara ụlọ elu Çanakkale Bosphorus Bridge. Karaismailoğlu na-akọwa oru nke Minista ya maka oge ohuru, site na uzo ugbo elu [More ...]
Nkwupụta Nke Obodo Obodo Tekirdağ Port of Tekirdağ Port
Tekirdağ Port Embankment Plan bu nke mbu nke ndi oru oha na ndi mmadu kwadoro mmeghe nke mbu na 1997. Mgbe e mechara, a na-akpọta ọdụ ụgbọ mmiri a ma gaa n'ihu na-arụ ọrụ ya n'okpuru aha Akport Port. N’afọ 2006, [More ...]
Gbanwee mkpa na Konya Tram Line
Obodo Konya na-aga n’ihu na-eme mmetụ nke ga-eme ka okporo ụzọ dị mfe n’obodo niile site na ime ka ụbọchị n ’ọpụpụ ghọọ ohere. Onye isi obodo Konya Uğur İbrahim Altay, n'okporo ụzọ ebe ụmụ amaala nọ n'ụlọ [More ...]
Tụ Ego Maka ụtụ isi mụbara site na 5% na otu afọ na Istanbul
N'ime pasent 45,5 nke ụtụ ụtụ isi ndị anakọtara na Turkey na Istanbul, ụtụ ụtụ isi mụbara site na pasent 5 gbagoro karịa n'afọ gara aga. Sharetụ nke ụtụ isi oriri na ụma n'ihe mmefu ego bụ pasent 21, na ụtụ ụtụ [More ...]
Mpempe ọla edo nke ga-eme ka okporo ụzọ dị mfe na mmachi ụbọchị anọ dị na Izmir
Onye isi obodo ukwu Izmir nke obodo Tunç Soyer nyochara ngwa ọrụ ndoro-ndoro nke ubochi a ka enyere iwu ịlọta. Soyer nyekwara ozi ọma na okporo ụzọ dị n'ihu ebe ịzụ ahịa na Gaziemir chere ihu na Konak. [More ...]
Ọgbọ njem mpaghara mpaghara dị na Turkey
N'okwu ya na ememme ngwụcha ụlọ elu Çanakkale 1915, Onye isi ala Erdoğan kwuru, "Anyị nwere ọtụtụ ọrụ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, ikuku na mmiri ka a na-arụ. Mgbe emechara ihe ndị a, Turkey, [More ...]
Onye Isi Obodo Obodo Izmir nke Obodo Tunç Soyer na-eme ka ihe na-agba n'okporo ụzọ ịnyịnya ígwè ọsọ megide njupụta okporo ụzọ a na-atụ anya ịbawanye na usoro iwu. Soyer, onye ji igwe eji igwe ya gaa njem n'okporo ụzọ iji lelee ọrụ ndị dị ebe a, kwuru, sị, "Mgbe mgbasa nke oria belatara, [More ...]
Paykwụ rtgwọ Mgbanye Organic Amalitere Maka Ndị Ọrụ Ubi!
Onye Minista oru ugbo na oke ohia Bekir Pakdemirli kwuru nkwupụta banyere nkwado a ga-etinyere ndị ọrụ ugbo na-eji fatịlaịza na mkpụrụ osisi na 2019. Nkwupụta Minista Pakdemirli bụ nke a; “Ihe nchekwa ahịhịa nke ala anyị [More ...]
Mmepụta Ọkụ eletrik amalite Echi na Ilısu Dam
Turkey, otu n'ime ọrụ mmepe eletriki Ilisu nke kachasị ukwuu, nke mbụ n'ime ụlọ isii, May 19 Atatürk Ememe Ncheta na andbọchị Ndị Ntorobịa na Egwuregwu. Na usoro ogbako vidiyo nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Ndokwa nke Baskentray, Stations na Ahịa tiketi
Başkentray Ankara bụ otu n'ime ọrụ ndị nyere oke aka na njem ime obodo ya. Ankara-Istanbul, Ankara, Sivas na Ankara, Konya High Speed ​​Train project in Ankara [More ...]
Azụmaahịa Azụmaahịa na Ihe Ntanetị Software na Obodo na nke Mba ga-eme Stampụ
Minista ahia ahia Ruhsar Pekcan kwuru na ọ ga-ebido mmemme mebere ahaziri maka mmezu nke egwuregwu Coronavirus ọhụrụ (Kovid-19) na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na "Shoedexpo" na June 1-3. [More ...]
A ga-emeghe Bodrum Castle na njedebe nke June, ebe obibi ndị mọnk Sumela dị ka mmalite nke July
Minista na Omenala na njem Njem Mehmet Nuri Ersoy kwuru na ọrụ mweghachi nke abụọ na Bodrum Castle na-abịaru nso na njedebe, na ha na-eme atụmatụ imepe nnukwu ụlọ a ga-eleta na njedebe nke June kachasị ọhụrụ. Minister Ersoy, mweghachi na Bodrum Castle [More ...]
Oge agbasa ozi nke ebe R&D
Oge nnyefe nke akụkọ ọrụ R&D na ogige nke thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ na Nkà na ụzụ na nyocha njikwa ego nke ụlọ ọrụ na mpaghara Development Technology (TGB) maka otu ọnwa ruo 30 June 2020. [More ...]
Mịnịsta Selçuk: Anyị gbara mbọ weghachite ụmụaka 17 273 na ndị mụrụ ha
Zehra Zümrüt Selçuk, Mịnịsta nke ezinaụlọ, Ọrụ na Ọrụ Ọha; "N'ihi ebumnuche anyị na-enye maka ọrụ ndị metụtara ezinụlọ, anyị hụrụ na nlọghachite ụmụaka 2019 na ezinụlọ ha na 17." hụrụ na nkọwa. Nke ijere umuaka ozi [More ...]